Iindaba -Iindlela zokugcina ulondolozo lwelanga
Iindlela zokugcina ilanga
Emva kokuthenga iiglasi zelanga, kunqabile ukuba kunikelwe ingqalelo kulondolozo lwezibuko. Mhlawumbi abanye abantu bacinga ukuba ndiyinxiba kweli hlobo kuphela, kwaye abantu abaninzi bacinga ukuba bathenga izibuko zelanga ukukhusela kwimitha ye-ultraviolet nakwifashoni. Ngokubhekisele kwezinye iiglasi zelanga, ngekhe ziqwalasele. Ngapha koko, ukuba iiglasi zelanga zihlala zingcolisiwe, kwaye umsebenzi wayo uya kuncipha ngokuhamba kwexesha. Ayizukukwazi kuphela ukumelana nemitha ye-ultraviolet, inokubangela iingxaki zempilo yamehlo akho.
Ukugcinwa kwezibuko zelanga kuphantse kwafana neiglasi eziqhelekileyo. Ngoku makhe sijonge ukuba ungazinyamekela njani iiglasi zelanga.
1. Ukuba ilensi inamabala, igrisi okanye imizila yeminwe, sebenzisa ilaphu elithambileyo lekotoni kwiziphatho ezikhethekileyo zelanga ukuze wosule uthuli okanye ukungcola kwelensi. Ungaze usebenzise izikhonkwane okanye iimveliso ezinezithako zemichiza ukususa amabala kwilensi
2. Xa unganxibi, kufuneka zisuswe ngononophelo kwaye zisulwe kakuhle. Xa uyibeka, qala usonge itempile yasekhohlo (thatha icala lokunxiba njengomgangatho), beka isipili ujonge phezulu, sisongele ngelaphu lokucoca iilensi, kwaye usibeke kwingxowa ekhethekileyo. Qaphela ukuthintela ilensi kunye nesakhelo ekubeni sikrwemrwe zizinto ezilukhuni okanye ucofe ixesha elide.
3. Nqanda ukuthotywa ixesha elide emanzini, ungene emanzini, kwaye ubeke kwindawo emiselweyo ukuze uve elangeni; Ukuboniswa umbane okanye isinyithi ixesha elide akuvumelekanga
4. Kwakhona qaphela iindawo apho ioyile kunye neenwele ezaphukileyo kulula ukuziqokelela, ezinjengeetempile kunye neepads zempumlo. Khumbula, sukuhlamba ngamanzi ashushu aphezulu okanye uwubeke kwindawo enomswakama.
5. Kulula kwakhona ukukhubaza isakhelo xa uthatha iiglasi ngesandla esinye.
6. Ukuba isakhelo sikhubazekile okanye ukungakhululeki ukunxiba, yiya kwivenkile ebonakalayo ukubhiyozela uhlengahlengiso lobungcali.
Nika ingqalelo ngakumbi kukhathalelo lwezibuko zelanga, ukuze izibuko zelanga zikhuselwe ngokupheleleyo, kwaye izibuko zelanga zikhuselwe ngcono.
Ixesha lokuposa: Aug-18-2020